LEGO 40516 လူတိုင်းသည်ကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုတရုတ်တွင်တားမြစ်ထားသည်
17 / 09 / 2021 17 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 201 Views စာ2မှတ်ချက် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, တရုတ်နိုင်ငံ, Instagram ကို, Lego, LEGO.com, လိင်တူချစ်သူ, LGBTQIA +, မဲ Ashton, Reddit, အဆိုပါ LEGO Group
တရုတ်မှရောင်းချခြင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်ဟုသိရသည် Lego အဖွဲ့၏ပထမဆုံး LGBTQIA+ အစုံ၊ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ.
တရုတ်လူမှုကွန်ရက် Weibo တွင်တင်ထားသည့်ဖျက်လိုက်သောပို့စ်အရ၎င်းသည်အစုံကိုစတိုးဆိုင်စင်များနှင့်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမှ (အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကြောင့်) ဟု Google မှဘာသာပြန်သည်ဟုဆိုထားသည်။ မူရင်းပို့စ်၏ screenshot (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) သို့ပေးပို့ခဲ့သည် Brick Fanatics Instagram အသုံးပြုသူမှ persiealbum.
ဇာတ်လမ်းသည်လက်ရှိတွင်အချီအချလုပ်နေသည် redditr/China တွင်အကြမ်းအားဖြင့်ထောက်ခံမဲ ၃၅၀ ရှိသည်။ ထိုပို့စ်၏မှတ်ချက်များအရအစုံအတုဗားရှင်းများကိုတရုတ်အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Taobao(ဥပမာ) 'Everyone is Excellent' နှင့် 'Everyone is unique' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ရောင်းအားကိုကန့်သတ်သည့်စကားလုံးပေါ်ထွက်လာသောအခါမူလအစပိုင်းအတွက်စာရင်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Lego Progress Pride Flag ၏အရောင်များကိုဝတ်ဆင်ထားသောအဖွဲ့၏ပထမဆုံးထင်ရှားသော LGBTQIA+ set ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အစင်း ၁၁ ခုစီသည် LGBTQIA+ ရောင်စဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးသို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
LGBTQIA+ လူမျိုးများသည်လက်ရှိတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်းလိင်တူစုံတွဲများကိုလက်ထပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ခံခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ အဲ့လိုနဲ့ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ တကယ်တမ်းရောင်းရငွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းသည်တရုတ်အစိုးရမှမကြာသေးမီက LGBT ဆန့်ကျင်ရေးအလေ့အကျင့်များထဲမှနောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုလအစောပိုင်းတွင်နိုင်ငံ၏သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည် သပိတ်မှောက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည် p အဖြစ် sissy idols များart နောက်ထပ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုအပါအ ၀ င်အစီအစဉ်တစ်ခု arts နှင့်ဖျော်ဖြေရေးရှိုးများနှင့်ဆက်စပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များ၎။ အရ အယ်လ်ဂျာဇီယာဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်း WeChat သည်တက္ကသိုလ်အတွက် LGBT အုပ်စုများ၏အကောင့်များကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
တရုတ်ပြည်ပြင်ပ၊ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ - မှဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သော Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ Vice President ဖြစ်သူ Matthew Ashton ပါ ဒီ set ကသူ့အတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ - ဂမ္ဘီရတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပစ်လွှတ်မှု ကျော်လွန် Lego စတိုးဆိုင်များနှင့် LEGO.com 2022 ၌တည်၏။
← အပိုဆု VIP အမှတ်များဖြင့်ယခုရရှိနိုင်သော LEGO Super Mario အစုသစ်သုံးခု
LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Batman ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုLEGO 40516 လူတိုင်းသည်ကြောက်စရာကောင်းသည်ဟုသတင်းများကတရုတ်တွင်တားမြစ်ထားသည်"
The Everyone is Awesome set သည် Lego ကုမ္ပဏီမှမည်သည့်နိုင်ငံများသို့ရောင်းချရမည်ကိုသေသေချာချာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သောနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် LGBT ဆန့်ကျင်သောနိုင်ငံများရှိပြီး၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံအားဖြင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုတားမြစ်နိုင်သောနိုင်ငံများရှိသည်။
၎င်းသည်ချစ်စဖွယ်အစုံနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန် Matthew အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ အဖွဲ့နာမည်ပြောင်းတာက LGBT ဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောင်းတာနဲ့ဘာခြားနားမှုရှိမလဲဆိုတာမသေချာဘူး။ ၎င်း၏အရောင်များသည် LGBT အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။